Cali Cosoble oo qoraal lama filaan ah soo saaray – Ma isbedelay mowqifkiisii dhismaha HirShabeelle? – Hornafrik Media Network
Madaxweynihii hore ee maamulka HirShabeelle Cali Cabdullahi Cosoble ayaa si ka duwan sidii laga filayey uga fal-celiyey shaacinta liiska xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka HirShabeelle.
Madaxweyne Cosoble, oo in badan mucaaradsanaa hab dhismeedka maamulka cusub ee HirShabeelle, ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu hambalyo ugu diray xildhibaanada cusub ee maamulkaas.
Sidoo kale qoraalkiisa waxuu ku sheegay in sida u muuqata xubnahan cusub ee baarlamaanka HirShabeelle ay ka tayo roon yihiin kuwii hore ee asaga doortay, kadibna riday, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaa ii muuqata Baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle inuu ka taya sarreeyo Baarlamaankii ka horreeyay. Waxaan u rajeynayaa guul, waxaana leeyahay HAMBALYO,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Madaxweynihii hore ee maamulka HirShabelle Cali Cosoble.
Qoraalka Cosoble ayaa waxaa aamini waayey dadka ku xiran boggiisa ee u muuqda inay kasoo jeedaan beeshiisa, kuwaas oo qoraalka uga jawaabay inay weydiiyaan in akoonka laga jabsaday iyo in kale.
Isaga oo taas ka jawaabaya ayaa qoraal kale oo uu soo dhigay facebook waxa uu ku yiri “Kama aanan hadal qaddiyad iyo heshiis laakin waxaan isu eegay baarlamaankii hore iyo midka hadda lagu dhawaaqay, waxaana taya sarreeya midka cusub.”
Madaxweyne Cosoble ayaa ka soo jeeda beesha Xawaadle oo degta gobolka Hiiraan, islamarkaana aad u saluugsan sida haatan loo wajahayo dhismaha maamulka HirShabeelle.
Odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo inta badan siyaasiyiinta beeshaas ayaa ku doodaya in markii la yagleelayey maamulkan afar sano ka hor lagu heshiiyey inaan Xawaadle lagula tartami karin kursiga madaxweynaha HirShabeelle.
Haatan waxaa muuqata in dowladda dhexe ay qorsheyneyso in kursiga madaxweynaha HirShabeelle uu noqdo mid loo geli karo tartan furan, in kastoo wax walba ay isbedeli karaan.
Siyaasiyiin ay ka mid yihiin guddoomiyeyaashii hore ee gobolka Hiiraan, sida Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Cabdifitaax Xasan Afrax oo ka soo jeeda beesha Xawaadle ayaa kol hore gaaray Jowhar, iyagoo eedeyn u jeediyey xubnaha beeshooda ee saluugsan sida wax u socdaan.
Haatan waxaa muuqata in siyaasiyiinta Xawaadle ee gaartay Jowhar, isla markaana wax ka dhisaya maamulka uu ku mowqif noqday Cali Cosoble oo markii hore aad u diidanaa sida wax u socdaan, sidoo kalena dowladda federaalka ku eedeynayey inay dhismaha HirShabeelle ku heyso faragelin qayaxan.